HRW oo Dowladda Somalia uga digtay in la dhibaateeyo Dumarka Soomaaliyeed – Radio Daljir
Agoosto 4, 2015 1:50 b 0
Talaado, Ogoosto 04, 2015 (Daljir) — Hay’adda ayaa soo saartay Warbixin ka kooban 20-bog oo lagu soo bandhigay Baaritaano iyo Wareysiyo lala yeeshay Haweenka ku nool dalalka ay Dagaalladda ka socdaan ee Tacadiyadda ugu badan loogu geysto Haweenka Dhibanayaasha ah.
Sarah Taylor oo ah Garyaqaanad ka tirsan Hay’adda Human Rights ayaa ugu baaqday QM iyo Dowladaha xubnaha ka ah in wax laga qabto dhibaatooyinka ay Haweenka kala kulmaan colaadaha sokeeye ee ka dhacayo Caalamka.
Warbixinta waxaa lagu muujiyey inay Madaxda Ururradda Haweenka Bulshadda Rayidka iyo Difaacayaasha Xuquuqda Aadanaha ay mar kasta la kulmaan khataha ay Haweenka kala kulmaan colaadaha hubeysan.
Hay’adda Human Rights Watch waxay sheegtay in Haweenka iyo Gabdhaha la dhibaateeyey ee ay wareysteen ay u kala dhasheen dalalka Somalia, Afghanistan, Colombia, Iraq, Libya, Nepal, Nigeria, South Sudan, Sudan, Syria, Uganda iyo Kongadda Dimuqraadiga ee DRC.
Golaha Ammaanka ee QM, ayaa lagu wadaa inay bishii October ee sannadkan u dabaal degaan 15-sanno guuradii ka soo wareegtay markii ay u codeeyeen Qaraarka Tirsigiisu ahaa 1325, ee Dhowrista Xuquuqda Haweenka iyo Gabdhaha ku nool dalalka ay ka socdaan colaadaha hubeysan.
Xildhibaan ka tirsan barlamaanka Kenya oo xabsiga laga sii daynayo